JIRAMA 67 HA Filaharam-be ny fandoavan-jiro, nisy fitakiana CIN
Na dia efa voarara tsy azo natao intsony aza nanomboka omaly Alatsinainy 23 Septambra ny fivoahana ny trano sy ny fivorivoriana dia mbola vahoaka be ihany no tonga nilahatra nandoa jiro
sy rano tetsy amin’ny JIRAMA 67 ha. 60 isa izy ireo raha kely izay sady tsy nanaja ilay elanelana 1 metatra akory no mbola tsy nanao sarom-bava ihany ny ankamaroany. Raha araka ny resaka nifanaovana tamin’ireo mpanjifa ireo dia maro tamin’izy ireo no tsy nahandry ilay kabarin’ny filoham-pirenena ny Alahady alina teo ka tsy nahalala na inona na inona. Nisy ihany koa anefa ireo nahalala ihany saingy noho ny tahotry ny ho tapaka jiro na rano dia tsy maintsy nandeha. Raha tsiahivina anefa dia efa namoaka vaovao ny JIRAMA ny sabotsy teo fa efa azo aloha amin’ny alalan’ny finday manomboka izao ny faktiora hiarovana amin’ny fiparitahan’ilay otrik’aretina coronavirus. Manoloana io tranga io dia tsy maintsy nandray ireo mpanjifa ihany ny JIRAMA saingy nitaky kara-panondrom-pirenena kosa. Ny mba hahafahana manaraka ireo olona ireo raha sanatria ka misy tranga no antony hahafahana mifehy faran’izay haingana ny fiparitahan’ilay otrik’aretina coronavirus.